पूँजीबजारमा उतारचढावको वर्ष | गृहपृष्ठ
Home प्रडक्ट पूँजीबजारमा उतारचढावको वर्ष
प्रडक्ट 44 views
पूँजीबजारमा उतारचढावको वर्ष
वर्षको उच्च बिन्दु १६९३ र न्यून ११६८
Latest posts by मल्लिका घिमिरे (see all)
पूँजीबजारमा उतारचढावको वर्ष -
५ वर्षयताकै सबैभन्दा बढी कम्पनीको शेयर कारोबार -
‘संस्थागत र नीतिगत सुधार आवश्यक’ : ऋणपत्रविना पूँजीबजार अपूरो -
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा यस वर्ष धेरै सुधारका कार्यक्रम भए । ब्रोकरको शाखा अर्थात् रिमोट वर्क स्टेशन (आरडब्ल्यूएस) विस्तार शुरू भयो । आरडब्ल्यूएसको सहयोगमा लगानीकर्ताले मार्केट डेप्थ, मूल्य परिवर्तन अवलोकन गरी खरीदविक्रीका लागि आदेश दिने र कार्यान्वयन गराउने सुविधा पाएका छन् । नेप्सेको सूचीमा विकास बैङ्क र लघुवित्तलाई एकै समूहमा राखेर परिसूचक गणना गर्दै आएकोमा ती दुवैलाई अहिले अलगअलग समूहमा राख्न थालिएको छ । प्राथमिक बजारमा अनलाइनमार्फत शेयर खरीदका लागि आवेदन दिन सकिने सुविधा (सी–आस्बा) प्रणाली लागू भयो । दोस्रो बजारलाई पनि पूर्ण अनलाइन प्रणलीमा लैजाने योजना भने अझै पछि धकेलिएको छ । यद्यपि, यो पनि १/२ महीनामा हुने आश्वासन पाइएको छ ।
२०७४ सालमा पूँजीबजारमा भएको उतारचढाव
करीब ३० लाख लगानीकर्ताको लगानी रहेको शेयरबजारमा १ वर्षभित्र २ सय २६ दिन कारोबार भएको छ । २०७४ वर्षभरिमा नेप्से परिसूचक ४ सय १९ दशमलव ५८ अङ्क घटेको छ । यसबीच शेयरबजार ९४ दिन बढेको थियो भने १ सय ३२ दिन घटेको थियो । १ वर्षभरिमा सबैभन्दा बढी कारोबार भएको दिन वैशाख १० गते रहेको छ । यस दिन १ सय ४२ कम्पनीहरूको रू. १ अर्ब ५३ करोडबराबरको शेयर कारोबार भएको थियो । सो दिन लगानीकर्ताहरूको सम्पत्ति वर्षभरिकै उच्च रू. १९ खर्र्ब ६२ अर्बबराबर रहेको थियो । यो वर्ष जम्मा १४ दिन मात्र रू. १ अर्बभन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको थियो । वर्षभरिमा सबैभन्दा न्यून कारोबार भएको दिन असोज १७ गते हो । सो दिन १ सय २० कम्पनीको रू. १४ करोड ५ लाखबराबरको शेयर कारोबार भएको थियो ।
शेयर आपूर्तिको बाढी
केही महीनाअघिदेखि बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा लगानीयोग्य पूँजीको अभावका शेयर कारण बजार निकै तल झ¥यो । साथै, नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय कम्पनीहरूलाई चुक्तापूँजी वृद्धि गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्दा विभिन्न कम्पनीहरूले हकप्रद तथा बोनस शेयर निष्कासन गरे । यसरी लगानीकर्तासँग भएको रकम शेयर सुरक्षित गर्नमा खर्च भयो । यसै वर्ष आईपीओ तथा एफपीओ पनि धेरै जारी भयो ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)ले यस आर्थिक वर्षभित्र अनलाइन प्रणाली पूर्णरूपमा लागू गर्ने तयारीस्वरूप जेठमा परीक्षण गर्न लागेको हो । नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले अनलाइन प्रणालीका लागि सफ्टवेयर तयार गरिरहेको वाइको कम्पनीले १८ ओटा मोडेलमध्ये १६ ओटाको ८० प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसकेको जानकारी दिए । यीबाहेक सर्भिलेन्स र ब्रोकर ब्याक अफिसको काम बाँकी रहेको उनले भने । ब्रोकर ब्याक अफिसका लागि चाँडै नै ब्रोकर कम्पनीहरूसँग छलफल गर्ने समेत साउदले बताए ।
नेप्सेका अनुसार जेठमा अनलाइन प्रणालीको आन्तरिक परीक्षण गरे पनि त्यसपश्चात् युजर एसेप्टेन्स टेष्टिङ (यूएटी) गर्नुपर्ने हुन्छ । तैपनि, आर्थिक वर्षभित्र पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणाली लागू गर्ने नेप्सेको तयारी छ ।
वर्ष २०७४ को अन्तिम दिन भएको कारोबार
बिहीवार साताको अन्तिम दिन बजार शून्य दशमलव ३३ प्रतिशत बढेर बन्द भएको छ । कारोबार शुरू भएदेखि बढेको बजार अन्त्यसम्म बढेर बन्द भएको छ । बजार अन्त्यमा ४ दशमलव २२ अङ्क बढेर १ हजार २ सय ७७ दशमलव ५५ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ ।
यस दिन १ सय ६५ कम्पनीको ५ हजार ९ सय ६३ पटकको व्यापारमा १३ लाख २९ हजार ९ सय ३० कित्ता शेयरको रू. ४४ करोड ३० लाखबराबरको शेयर कारोबार भएको छ । म्यानुअल कारोबार रू. ५४ लाख ४६ हजारबराबर रहेको छ । कारोबार भएका ९ समूहको परिसूचकमा बैङ्किङ र वित्त समूहको परिसूचक घटेको छ भने बाँकी सात समूहको परिसूचक बढेको । यस दिन कारोबार रकम अघिल्लो कारोबार भएको दिनको तुलनामा ५० दशलमव ९७ प्रतिशत बढेको छ । रू. १४ करोड ९५ लाखबराबर कारोबार रकम बढेको हो । यस दिन ‘क’ वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन सेन्सेटिभ इण्डेक्स शून्य दशमलव २७ प्रतिशत बढेर २ सय ७२ दशमलव ४५ अङ्क पुगेको छ ।
३० चैत्र २०७४, शुक्रबार ०९:३०